कहिल्यै पनि हतारमा मेकअप गर्नुहुँदैन !
मेकअप अनुहारको सौन्दर्यका लागि मात्र नभई सुरक्षाका लागि पनि गरिन्छ । यद्यपी मेकअपमा प्रयोग हुने प्रोडक्ट र आफ्नो छालाको नेचरबारे भने सचेत हुन आवश्यक छ । किनभने खराब मेकअपले क्षणिक रुपमा सुन्दर देखिएपनि पछि कुरुपसमेत बनाउँछ । त्यसैले सकेसम्म प्राकृतिक मेकअप गर्नुपर्छ ।
आकर्षक व्यक्तित्व कसरी बनाउने ?
एजेन्सी । मानिसको व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी एकदमै महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । कुनैपनि मानिसको परिचय त्यस व्यक्तिको व्यक्तित्वले जनाउँछ । हरेक क्षेत्रमा व्यक्तित्वको विशेष महत्व हुन्छ । तपाईले आफ्नो व्यक्तित्वको विकास गरेर सबैको अगाडी आकर्षक देखिन सक्नुहुन्छ । तर यसका लागि केही विशेष उपायहरु रहेका छन्, जसले तपाईको व्यक्तित्वलाई आकर्षक बनाउन मद्धत पुर्याउँछ ।
यसकारण राति सुत्दा ‘ब्रा’ नलगाई सुत्नुपर्छ
काठमाडौं । कैयौं महिलाहरु रातमा सुत्दाखेरि ब्रा फुकालेर सुत्ने गर्छन्, किनभने दिनभर ब्रा मा भइराख्दा उनिहरुलाई असहज हुने गर्दछ भने ब्रा फुकालेर सुत्दा केही राहत मिल्ने गर्छ । तर अन्य केही महिलाहरु यस्ता पनि हुने गर्छन्, जो रातमा ब्रा लगाएरै सुत्दा आफूलाई सजिलो महसुस गर्छन् ।
अकबरे खुर्सानी खानुका फाइदै फाइदा !
एजेन्सी । खानाका परिकारलाई स्वादिष्ट बनाउन हामी खुर्सानीको प्रयोग गर्छौं । त्यसमा नि डल्ले अर्थात् अकबरे खुसार्नीलाई विशेष मानिन्छ ।
बिहान उठेर नगर्नुहाेस् यी सात गल्ती
काठमाडौँ (एजेन्सी) । बिहान चाँडै उठ्नु राम्रो बानी हो ।
आँखाको डार्क सर्कल कसरी हटाउन सकिन्छ ?
निद्राको कमी, कामको चाप र अत्यधिक तनावका कारण आँखामा डार्कसर्कल देखापर्छन् । जसले मानिसको सौन्दर्यमा ह्रास आउँछ । आँखामा डार्क सर्कल आउँदा विरामी जस्तो देखिन्छ, वा अनुहारको चमकतामै कमी आउँछ । त्यसैले समयमै यसलाई हटाउने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
काठमाडौं । एक प्रचलित लोक कथाका अनुसार पुरानो समयमा एक गरीब व्यक्ति एकदमै निराश भएका थिए । उनी गरिबी हटाउनका लागि लगातार प्रयास गरे तर सफल हुन सकेनन् । एक दिन ती व्यक्ति हिम्मत हार्दै निराश हुन पुगे । केहि दिन बित्दै गर्दा उनको भेट एक सन्तसँग भयो । ती व्यक्तिले सन्तलाई आफ्नो सबै समस्याहरु बताए । यता ती महात्मा व्यक्ति सन्तले उनलाई निराश नहुन आग्रह गर्दै प्रयास जारी राख्न भने । यो कुरा सुनेपछि उक्त गरीब व्यक्तिले म हार खाइसकेँ, अब म केही गर्न सक्दिन भने ।
दिमाग तेजिलो बनाउन यसो गर्नुहोस्
उमेर ढल्किँदै जाँदा स्मरणशक्ति पनि कमजोर हुन्छ । तर, पछिल्लो समय सानो उमेरका मानिसको स्मरण शक्ति पनि कमजोर भइरहेको छ । तनाव, खराब जीवनशैली तथा खानपान अनि अपूरो निद्राले दिमागमा दबाब परेर स्मरणशक्ति नाश गराउन भूमिका खेल्छ ।
सफल बन्नका लागि स्टिभ जब्सका यस्ता छन् पाँच सुत्र
हरेक मानिसको सफल बन्ने सपना हुन्छ । तर, कसरी भन्ने धेरैलाई थाहा हुँदैन । ठूलै काममा हात हाल्नुपर्छ भन्ने होइन, सानो कामबाट पनि सफल बन्न सकिन्छ ।
मेकअप गर्नु अगाडि यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ